Vakuru veZIFA, Dzidzo neMitambo Vonzurudzwa Pamusoro peAsiagate
Muzvare Rushwaya vakaburitswa muhusungwa neMuvhuro mushure mekubhadhariswa mari yechibatiso, zvichitevera kusungirwa nyaya yekuita zvehuori nekutengesa mitambo kwavakaitwa neChishanu chapfuura
Komiti yedare reparamende inoona nezve dzidzo, tsika nezvemitambo nhasi yabvunzurudza munyori webazi re dzidzo, Va Steven Mahere, vakuru we Sports and Recreation Commission ne ZIFA pamusoro pe nyaya ye Asiagate umo vatambi vebhora vemu Zimbabwe vanonzi vaibhadharwa kuti vatengese mitambo yenhabvu iyo vaitamba kunyika dziri ku Asia.
Panguva iyi chief executive veZIFA, Muzvare Henrietta Rushwaya, ndivo vaironga mitambo iyi.
Muzvare Rushwaya vakaburitswa muhusungwa neMuvhuro mushure mekubhadhariswa mari yechibatiso, zvichitevera kusungirwa nyaya yekuita zvehuori nekutengesa mitambo kwavakaitwa neChishanu chapfuura.
Nhengo ye komiti iyi, Jeffreyson Chitando, vaudza Studio seven kuti mapato ose e MDC ne ZANU-PF muparamende akabatana mukuedza kutsvaga chokwadi munyaya iyi uye kuti nyaya ye huwori munhabvu nemitambo ibviswe.
Va Chitando vati Muzvare Rushwaya vainga vakabata vanhu vazhinji kubva kuhofisi yemutungamiriri wenyika, hofisi dzekupinda nekubuda munyika nevamwe vazhinji izvo zvakaita kuti nyaya iyi ienderere kwemakore pasina aizvibata.
Hurukuro naVa Jeffryson Chitando